Moramanga, fiara 4X4 nahafaty olona dimy. | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Expulsé de Madagascar pour pédophilie.
Ylias Akbaraly-Sipromad. L’Homme le plus riche de Madagascar (Forbes). →
Moramanga, fiara 4X4 nahafaty olona dimy.
Publié le 29 février 2016 par Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
5 maty tao Moramanga Efa tany tsy misy fanjakana !
Nandriaka ny ra tao Moramanga omaly tamin’ny nafitsoky ny tovolahy metisy karana iray nitondra fiara 4×4 Ford « pick-up ».
Mihevitra azy ho ambonin’ny lalàna sy afaka manao izay tiany angamba izy, eny fa na dia handripaka sy hamono olona aza, tsy noraharahiany hatramin’ny polisy. Dimy no maty ary efatra hafa naratra mafy.
Niala avy any Toamasina hihazo an’Antananarivo ilay fiara. Dimy mianaka no tao anatin’ilay fiara, dia ny mpamily sy karana vavy iray niaraka tamin’ny zanany telo. Niato kely tao Andasibe ny dian’izy ireo, mba hitsidika tao an-toerana. Nilaza ho tsy salama ka tsy afaka hanohy ny familiana fiara ilay mpamily nialoha ny fiaingana tao Andasibe. Matahotra ny mitondra fiara amin’ny lalam-pirenena anefa ilay karana vavy tompon’ny fiara, ka tsy sahy nandray ny familiana.
Ilay tovolahy metisy karana ihany no namily, saingy vao niainga tao Andasibe dia nirimorimo fandeha. 1km tsy hidirana ny tanànan’i Moramanga, misy toerana fisavan’ny polisy fiara no namoa-doza, tokony ho tamin’ny mitataovovonana, fotoana firavan’ny fiangonana.
Nofaohiny ny takelaby an’ny polisy milaza fa tokony hijanona handalo fanamarinana ny mombamomba ny fiara. Tsy vitan’izay fa nandona polisy iray niasa teo koa ilay izy. Naratra mafy ilay polisy ary nentina haingana namonjy ny hopitaly.
Tsy nijanona ilay fiara fa nanohy ny lalany hatrany. Vao niala 30m teo, dia nandona lehilahy iray avy niangona. Maty tsy tra-drano io. Nisy lehilahy faharoa, handeha hivarotra ihany koa voadona, ary dia maty tsy tra-drano. Vehivavy iray mitondra vohoka efa-bolana niaraka tamin’ny zanany lahy, telo taona ihany koa voafaoka ary dia samy namoy ny ainy teo no ho eo.
Mety nitombo ny loza raha tsy nandray andraikitra nanakenda ilay tovolahy mpamily sady nanitsaka ny hisatra ilay karana vavy teo anoloana, nanao izay hampijanonana ilay fiara. Tao anatin’izay no nidona tamin’ny kamiao ilay 4×4. Tapaka tao anatin’izany ny tongotr’ilay madama.
Tsy nijanona teo, fa raha nangata-panazavana tamin’ilay tovolahy metisy karana ny mpamilin’ilay kamiao, dia nodarohany. Nisy ramatoa efa zokiolona sendra azy koa nodarohany ary dia mangamangana ny tarehiny. Tamin’io fotoana nikasihany tanana ilay ramatoabe io indrindra no hitan’ny olona ilay mpamily namoa-doza, ka nosamborina ka sady niharan’ny daroka no nentina tany amin’ny kaomisarian’ny polisy ao Moramanga.
Namoy ny ainy tokony ho tamin’ny telo ora tolakandro ilay polisy voadonany, noho ny ratra be nanjo azy.
Nentin-katezerana ny olona, ka nodoran’izy ireo teo afovoan-dalana amin’ny lalam-pirenena faha-2 ilay fiara. Nangatahan’izy ireo hatao fitsaram-bahoaka ihany koa îlay mpamily namoa-doza.
Jean D. TiaTanindrazana.
Moramanga : Fiara 4X4 nahafaty olona dimy, nodoran’ny olona
Redaction Midi Madagasikara 29 février 2016
Razana efatra no nivalampatra tamin’ny sisin’arabe amin’ny lalam-pirenena faharoa, mizotra mankany Toamasina, omaly tokony ho tamin’ny mitataovovonana. Ny iray rangahy avy nivavaka , ny iray rangahy handeha hivarotra ary ny fahatelo ka hatramin’ny fahefatra dia ramatoa bevohoka sy ny zanany lahy izay vao avy nankalaza ny faha-telo taonany, indray niara-maty tao anatin’ity raharaha ity. Ny fahadimy farany dia polisim-pirenena teo am-panaovana ny asany. Toy izao ny zava-nitranga : niala avy any Toamasina ireto olona tao anaty fiara tsy mataho-dalana ireto ny maraina, tsy nisy olana na ny mpamily na ny entina, noho ity asa ity efa fanaony: ny mitondra ireo fianakaviana ireo hatramin’izay.Teo Andasibe no nangataka ny hijery valan-javaboahary, ary taorian’izay no nahitan’ireo fianakaviana niaraka taminy zaza telo mianadahy sy ny reniny, fa nisy fiovàna ny fihetsiny manontolo ary tsy nandeha mora intsony sady tsy niraharaha izay olona na fiara na izay mety nifanena taminy izy.Nanomboka teo amin’ny toerana fampijanonan’ny polisim-pirenena fiara alohan’ny hiditra ny tanànan’i Moramanga no nanomboka nanitsaka an’ilay polisy teo amoron-dalana izy, ary nitohy tamin’ny fanitsahana ireo olona izay maty teo noho eo. Samy mpandeha an-tongotra avokoa ireo farany. Ny tao anatin’ny fiara indray dia samy niezaka ny nandray fepetra manoloana ny nataon’ilay mpamily.
Ny hany azon’ilay ramatoa sy ny zanany natao dia ny nanakenda azy ka nahafahany nidona tamin’ny kamio nijanona teo amin’ny sisin-dalana. Lehiilahy iray hafa vokatr’izany no mbola tsaboina any amin’ny hopitalin’i Moramanga noho ny ratra tamin’ny fifandonana.Teo indray dia disadisa hafa no niseho. Izay rehetra nifanena tamin’ilay mpamily dia nodarohany avokoa eny fa na dia ilay renim-pianakaviana niaraka taminy izay efa tapa-tongotra aza. Ramatoa iray hafa koa, efa zokiolona miandry fiara hody no nodarohany ary ny mpamily ilay kamiao nodominy mbola niharan’ny herisetra ihany koa.
Efa eo am-pelatanan’ny polisim-pirenana ny fanadihadiana.Manameloka izao zava-bitan’ilay mpamily izao ny solombavambahoaka Randriamahefa Henri Charles sy ny loholon’i Madagasikara Razanajato Virginie nandrindra ny famangian’izy ireo ny fianakaviana mana-manjo sy nandritra ny fidinan’izy ireo nijery ny zava-nisy. Omaly moa dia nodoran’ny olona ilay fiara tsy mataho-dàlana ary torak’izany ihany koa, niatrana teo anoloan’ny biraon’ny pôlisy ny olona, mangataka ny hanaovana fitsaram-bahoaka ilay nahavanon-doza.
CATHY Redaction Midi Madagasikara
Malagasy Noverezina ZO‎ à Malagasy noverezana « ZO
Fitsaram-bahoaka tao Moramanga : nodoran’ny olona ny fiaran’ilay Karana nahafaty olona 5
Par Taratra 29.02.2016
Faty nikararana! Izay ny vokatry ny loza nateraky ny fiara 4×4 Ford Ranger, nentina karana iray tany Moramanga, omaly. Olona dimy maty, efatra naratra mafy. Nodoran’ny olona ny fiara, mbola nitaky fitsaram-bahoaka ireo avy eo.
Polisy brigadie iray, mpianaka bevohoka sy ny zanany telo taona, ankoatra ny olona roa hafa no indray maty nofaohin’ny fiara 4×4 Ford Ranger, omaly, tolakandro tany Moramanga. Maty tsy tra-drano ary niampatrampatra teny amin’ny arabe ny razan’ireo olona ireo. Nisy olona efatra ihany koa naratra mafy vokatr’izany. Mpianaka avy nivavaka ireo anisan’ny namoy ny ainy ireo. Polisy nanao ny asany, nisakana ilay fiara ihany koa ilay voafaoka io.
Saika hitsoaka ilay 4×4 saingy voabahan’ny kamiao semi-remorque iray ka nidona tsy tafahetsika teo intsony. Nihazakazaka namonjy teny ny mponin’i Moramanga ary nikasa hisambotra ilay nitondra ny fiara, saingy tafatsoaka io. Nanamparan’ny olona ny hatezerany ka nodoran’ny olona avy hatrany ilay fiara.
Araka ny vaovao avy any an-toerana, karana iray sy vehivavy iray tao anatin’io fiara io. Nitsoaka nandeha tany amin’ny biraon’ny polisy ilay karana ary notanana avy hatrany. Ilay vehivavy kosa tapatongotra ary nalefa any amin’ny hopitaly. Soa ihany fa tsy nodoran’ny olona tao anaty fiara tao izy ity. Rehefa avy nanala ny fony teo amin’ilay fiara 4×4 ny olona, nirohotra nankany amin’ny biraon’ny polisy nitaky ny hamoahana ilay karana hanaovana fitsaram-bahoaka. Nitangorona teo ny olona marobe nitabataba hatramin’ny ora nanoratanay. Nandamina ny toe-draharaha ny lehiben’ny mpitandro filaminana any an-toerana.
Voalaza fa efa tany Andasibe no nandona olona io fiara io ary nitsoaka. Izao tany Moramanga izao fa tafajanona, kanefa mbola nahafaty olona ihany koa. Raha ny fanazavana azo ihany, mety ho mamo izy io. Mandeha ny famotorana momba ilay karana.
Manahy ny ho afa-maina ny olona
Raha ny filazan’ireo mponina any Moramanga momba ity loza ity, mampanahy azy ireo ny mety hahavotsotra moramora foana ilay karana io. Mateti-pitranga ireo mpanam-bola mamoa-doza tahaka izao, no afaka rehefa mahaloa vola amin’izay mifanaraka aminy, hatrany amin’ny mpitandro filaminana ka hatramin’ny fitsarana. “Ny kolikoly sy ny fananan’io karana io vola mihitsy no antony angatahinay ny hanaovana fitsaram-bahoaka azy ity”, hoy ny olona.
Mampiseho tsy fahatokisan’ny olona ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ny fitakiana fitsarambahoaka tahaka itony. Eo ihany koa ny fankahalana vahiny sy ny olona manambola raha vao misy ny trangan-javatra tahaka izao. Maneho ny alahelon’ny olona sy ny elanelana be misy eo amin’ny mpanankarena, ny vahiny ary ireo vahoaka tsy mandady harona ny raharaha tahaka izao.
Fitsaram-bahoaka tao Moramanga : nodoran’ny olona ny fiaran’ilay Karana nahafaty olona 5…
Moramanga : Un conducteur de 4×4 fou – 5 morts 4 blessés
Dimanche sombre pour la population de Moramanga. Un chauffard, roulant à tombeau ouvert tue cinq personnes et blessant 4 autres personnes au passage du contrôle routier effectué par la Police à l’entrée Est de la ville. Parmi les victimes figurent un brigadier de police, une femme enceinte et son fils âgé de trois ans.
Le chauffard a déjà fauché une personne à Andasibe, avant qu’il fasse de lourds dégâts à Moramanga.
Le bilan serait même lourd si la passagère propriétaire du véhicule assise sur le devant du 4×4 pick-up n’aurait pas agi à temps en essayant de maîtriser la voiture pour immobiliser la voiture. La voiture a heurté un camion, et la dame s’est cassée la jambe.
D’ailleurs, l’accident s’est produit après la sortie de la messe dominicale.
La situation se dégénère. Une foule en colère a incendié la voiture, et réclame à ce que le chauffard leur soit livré pour une justice populaire.
(Photos FB) www.sobikamada.com
Ph. Patrick Raharimanana (FB)
Copyright © SobikaMada.com
Moramanga : Naiditra am-ponja vonjimaika ilay mpamily “adala” nahafaty olona
Redaction Midi Madagasikara 1 mars 2016
Taorian’ilay loza mahatsiravina namoizana ain’olona dimy tany Moramanga, fantatra fa naiditra am-ponja vonjimaika ilay mpamily “adala” tompon’antoka tamin’ity tranga ity, rehefa avy nohenoina teny amin’ny Fampanoavana, tany an-toerana. Araka ny fantatra kosa dia ny voalohan’ny volana aprily ho avy izao no fotoam-pitsarana azy. Marihana fa, ny andron’ny nisehoan’ilay loza, ny alahady teo, no voatery nalaina sy notazomina tao amin’ny biraon’ny pôlisy tao Moramanga ity lehilahy 25 taona ity, rehefa notadiavin’ny olona nentin-katezerana atao fitsaram-bahoaka. Ny kaomisaria indray no saika notafihan’ny sasany taorian’izay. Teo anatrehan’izany, dia namafisina tanteraka ny fiambenana ilay birao, nifanomezan’ireo mpitandro filaminana tany an-toerana tànana. Nidina tany an-toerana mihitsy aza ny tompon’andraikitra ambony teo anivon’ny pôlisim-pirenena, tamin’ity savorovoro ity.
Nalaky nilamina ihany anefa ny toe-draharaha tao an-drenivohitr’I Bezanozano tao. Tsiahivina fa avy any Toamasina no niainga ity fiara 4X4 Ford Ranger ity. Nentina lehilahy metisy karàna izy io, izay niaraka tamin’ olona efatra. Teny an-dàlana dia efa nandona nahafaty pôlisy saika hanakana azy ireo ity fiara ity, ary io nahafaty olona efatra tao an-tampon-tananan’i Moramanga io. Saika tsy nijanona izy io raha tsy nidona tamina kamiô, nanao fanahy iniana nampijanona azy. Efa saika ny ain’ilay mpamily no nanefa raha tsy tonga ireo mpitandro filaminana. Efa tsy nisy tao anatiny kosa ireo olona hafa niaraka taminy. Kila hotohoto kosa tetsy andanin’izay, nodoran’ny olona ilay fiara tsy mataho-dalàna; izay marihana fa fiara nofaina fa tsy azy ireo akory.
m.L Redaction Midi Madagasikara 1 mars 2016
Anaran’ilay mpamily : Jean Marco SOAFOME.
Ph. Patrick Raharimanana
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Moramanga accident 4X4 le 28 Fév 2016. Ajoutez ce permalien à vos favoris.